I-Ultrasonic Lysis nokuphazamiseka kweseli - iHielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "I-Ultrasonic Lysis nokuphazamiseka kweseli"
I-Lysis yili gama elichaza ukuphazanyiswa kwezindonga zamaseli noma izibilini. Ukuphazamiseka kwe-Ultrasonic kuyithuluzi elithembekile lokuphula amangqamuzana ukuze kukhululwe ama-intracellular njenge-DNA, amaprotheni, ama-organelles, nama-phytochemicals. I-ultrasonic lysis (aka cell cell disruption), amagagasi aphezulu aphezulu / amavolumu ama-ultrasound asetshenziselwa ukuphazamisa izitho zangasese. Njengoba i-ultrasonication ikhuthaza ukudluliselwa kwamandla, impahla ye-intracellular ikhishwa kwi-solvent ejikelezile. Umswakama oqukethe okuqukethwe kwamaseli lensisi ubizwa ngokuthi i-lysate.
I-cell lysis iyisinyathelo sokuqala ekuqhekekeni kwamaseli, ukuhlukaniswa kwe-organelle kanye nokufakelwa kwamaprotheni nokuhlanzwa.
Funda kabanzi mayelana nama-ultrasonic cell disruptors ne-ultrasonic lysis!